गुगल क्रोम – 10/10
यो ब्राउजर धेरै अरु भन्दा राम्रो काम गर्दछ: यो छिटो र अधिक स्थिर छ.
फायरफक्स (सन्दर्भमा AddOns तल थप हेर्नुहोस्) – 10/10
फायरफक्स, हुनत रूपमा गुगल क्रोम रूपमा populare छैन, अझै पनि अनुकूलन राजा छ. यो मेरो लागि नजिकको दोस्रो छ.
म मेरो पासवर्ड सुरक्षित राख्न KeePass प्रयोग, गुप्तिकरण, 3-पार्टी नियन्त्रण बाहिर भण्डारण.
Dropbox लागि अपरिहार्य प्रतिस्थापन. यो freemium छ – though I don’t haveapressing need to use the Pro Edition, मैले गरे भने म यसलाई भुक्तानी गर्न हिचकिचाउनु हुनेछ.
खेल को आफ्नो पुस्तकालयमा तपाईं कहाँ अरू हुनेछ?
यो serialise प्रतिलिपि / कदम संचालन मदत गर्न एक Windows उपकरण हो. TeraCopy 64bit अनुरूप मुद्दाहरू थियो जब म यो गर्न भन्दा सारियो. It only loses points for havingacluttered UX
समाप्ति को क्यानरी – 9/10
तपाईं हाल हेर्दै हुनुहुन्छ साइट लागि SSL प्रमाणपत्र चाँडै समाप्त रहेको छ भने यो चिटिक्क र न्यूनतम addon तपाईं बताउँछ. आफ्नो साइट एक SSL प्रमाणपत्र छ भने, म तपाईंलाई कारण सूचना वा miscommunication को एक सरल कमी आफ्नो साइटको SSL प्रमाणपत्र समाप्त हुँदैछ जोगिन मदत गर्न यो addon प्रयोग गर्न सिफारिस.
वेब विकास र प्रयोग पृष्ठ संग को लागि. कोड को सानो बिट पृष्ठ परीक्षण साथै सच्याउनका लागि उत्कृष्ट.
विशिष्ट प्रोक्सी सर्भर मार्फत विशिष्ट पृष्ठ ब्राउज लागि उत्कृष्ट. This is useful for when some sites are blocked or there is breakage for inaTransparent Proxy server. 🙂
म बरु पूर्वनिर्धारित मार्गहरू मार्फत जान चाहन्छु कि प्रोक्सी सर्भर माथि यो मार्गमा केही यातायात प्रयोग. यो पनि धेरै लचिलो छ. तपाईँले एक भन्दा बढी प्रोक्सी सर्भर उपलब्ध छन् र तपाईं सामान्यतया अचानक प्रयोग एक झिम्काउन मा जान्छ भने, बस अर्को एक भन्दा बढी स्विच. 🙂
GreaseMonkey लचकता भन्छन्. There are many available scripts online to customise pages.
NoScript अवरुद्ध विज्ञप्ति मा उत्कृष्ट छ. यसको एक सानो तपाईं चाहनुहुन्छ सबै साइटहरु सेतोसूचीमा छ देखि सुरुमा रिस – तर लामो यो धेरै लायक छ. 🙂
पन्ने पुनरुत्थान – 10/10
तपाईं एक साइटमा ब्राउज यदि लागि धेरै उपयोगी र यसलाई तल हुन हुन्छ. साइट हो भने स्थिर-सामग्री-उन्मुख त्यसपछि यो यो चाँडै सामग्री फेला पार्न सजिलो यसको अनलाइन क्यास यदि बनाउँछ.
Screengrab तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण वेब पेज को स्क्रिनसट पकड लिन्छ जो एक सरल स्क्रिनसट addon छ, यसलाई आफ्नो स्क्रीन आकार भन्दा ठूलो छ भने पनि. म पछि मा स्क्रिनसट क्रप छैन भनेर म ज्यादातर यसको प्रयोग.
तपाईं सर्भर पहिचान गर्न चाहनुहुन्छ भने यो प्लगइन बिना मार्फत जाने नरक त्यहाँ. म यो सबै समय के गर्न छ गर्न प्रयोग.
ट्याब मिक्स प्लस – 8/10
तपाईं अधिक 7-वा-यति ट्याबहरू छ भने लागि उत्कृष्ट ट्याब व्यवस्थापन.
भिडियो DownloadHelper – 9/10
भिडियो DownloadHelper मिडिया स्ट्रिम लागि देखिन्छ – विशेष डाउनलोड भइरहेको छ कि कुनै पनि ठूलो सामग्रीको लागि देख. जब तपाईं आइकनमा क्लिक, यो तपाईं हाल-डाउनलोड प्रवाहको देखाउँछ र तपाईं एक रूपमा लाममा विकल्प दिन्छ “सामान्य” डाउनलोड.
देखि तपाईं एफएफ दुर्घटनामा रहेको छ भने थाहा कहिल्यै वा शक्ति कटौती रहेको छ, म मेरो डेस्कटपमा प्रतिलिपि सुरक्षित गर्न रूचाउँछु र म त फेरि भिडियो डाउनलोड गर्न थप ब्यान्डविथ प्रयोग बिना भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. साथै, कममा, मानिसहरूले मलाई YouTube वा अन्य मिडिया जोडिन्छ पठाउनुभयो, म सामान्यतया पछि धेरै सम्म हेर्दै चिन्ता छैन – मेरो आफ्नै अवकाश वा एक ब्रेक समयमा.